Thursday April 16, 2020 - 12:33:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay ciidamada qaabilsan ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada ayaa lagu sheegay in toogasho ka dhacday mandiqadda Tabuuk ay sababtay dhimasahda Sheekh Cabdi Raxiim Al Xuweydi.
Dowladda Sacuudiga ayaa dilka sheekha marmarsiimo uga dhigtay in uu hubeysnaa uuna abaabulayay weeraro ka dhan ah ciidamada ammaanka sida ay hadalka u dhigtay.
Sheekha maanta ladilay ayaa horay u sheegay in dowladda Sacuudiga ay dil umaleegayso ayna dili doonto iyadoo ku marmarsiyoonaysa in uu hubaysnaa uuna katirsan yahay xoogag jihaadi ah.
Wadaadka ladilay ayaa caan ku ahaa in uu mucaarado dhismaha mashruuca fisqiga ah ee loogu yeero Niyuum iyo hay'adda waxa loogu yeero tamashlaynta ee fasaadka ka wadda dhulka xarameynka.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda ammaanka Aala Sacuudiga ayaa lagu sheegay in guriga lagu dilay Sheekh C/Raxiim lagasoo helay saanado hub ah islamarkaana uu dhaawacay 2 sarkaal sacuudiyaan ah sida hadalka loo dhigay.
Qaabka dowladda Sacuudiga ay udishay Sheekha kadibna ay uga hadashay waa isla qaabkii uu sheekhu horay usaadaaliyay in loo dilo doono kadibna dadka loo jiha wareerin doono, dowladda Sacuudiga waxaa majaraha u haya wiil dhalinyaro dabadhilif u ah reergalbeedka islamarkaana doonaya in uu fasaadiyo shacabka ku dhaqan dhulka Xarameynka.
Kumanaan kun oo kamid ah culimaa'udiinka iyo ducaadda Xarameynka ayaa ku jilba xiran xabsiyada halka qaar kamid ah culimadaas si hoose loo dilay halka kuwa kale lala'yahay halka ay jaan iyo cirib dhigeen.